Inkunkuma yeplastiki elwandle yingxaki enkulu yokusingqongileyo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Njengoko besesitshilo kwamanye amaxesha, iplastiki yeyona nto ingcolisayo kwiilwandle zethu nakwiilwandlekazi. Izigidi zeetoni zeplastiki zigcinwa kwiilwandlekazi zethu zibangela iimpembelelo ezimbi kwizityalo nakwizilwanyana ezihlala kuzo.
Kukho malunga nezigidi ezili-12 zeetoni yenkunkuma yeplastiki ezilwandle. Olu ngcoliseko alubonakali njengazo zonke ezinye izinto ezingcolileyo, kodwa lungcoliseko kwinqanaba lehlabathi. Iingcali ziqikelela ukuba ukuya kwiipesenti ezintlanu zeplastikhi eziveliswa kwihlabathi liphela ziphela zinkunkuma elwandle. Kwenzeka ntoni kwezi plastiki?
1 Ungcoliseko lweelwandle neelwandlekazi
2 Iingxowa zeplastiki kunye nengxaki yamazwe asakhulayo
Ungcoliseko lweelwandle neelwandlekazi
Uninzi lweeplastiki lufikelela elwandle ngemilambo. Ezi nkunkuma zikho kuyo yonke indawo. Zombini elunxwemeni nasemanzini, iintlanzi kunye neentaka zaselwandle zithwaxwa bubukho bazo
Eyona ngxaki inkulu yimicroplastics, ezona ntwana zincinci zenziwe kukukrala kwamatayara emoto okanye okuqulathwe kwizithambiso eziya zisiba yingozi ngakumbi nangakumbi. Iingcali zithetha malunga neetriliyoni ezintlanu zamasuntswana, enobunzima obupheleleyo beetoni ezingama-270.000, ezifumaneka elwandle. Iipesenti ezingama-94 zeentaka zaselwandle zifunyenwe ziswelekile kunxweme lwaseJamani bane-microplastics esiswini sabo.
Iingxowa zeplastiki kunye nengxaki yamazwe asakhulayo
Umzekelo, kumazwe ahambele phambili afana neJamani, iingxowa zeplastiki zithe shwaka. Nangona kunjalo, kuqoqosho olusakhulayo njengeAfrika, ukukhula koqoqosho kuthetha ukuveliswa kweplastikhi okungakumbi kwaye ngenxa yoko inkunkuma eninzi.
Nangona kumazwe amaninzi iplastiki ingasetyenziswa kwaye ingasetyenziswa, kuninzi ekusafuneka kusetyenzwe. Abantu kufuneka baziswe ukuba le yingxaki yokwenyani kwaye ibulala izilwanyana ezininzi. . Ukucoca ikhilomitha enye yeendleko zonxweme ukuya kuthi ga kwi-65.000 euro ngonyaka, ke kuyabiza noorhulumente.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Inkunkuma yeplastiki elwandle yingxaki enkulu yokusingqongileyo
Okuninzi kutyalomali ekusebenziseni amandla kunakwizibaso